Iza no Mpanjakan’ilay Fanjakana? Nahoana i Jesosy no Mpanjaka Tsara?
Ny Tilikambo Fiambenana | No. 2 2020
HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Akha Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Arhuaco Armenianina Armenianina (Andrefana) Aukan Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Baoulé Bashkir Bassa (Cameroun) Batak (Karo) Batak (Toba) Bengali Biak Bichlamar Bicol Boligara Boulou Catalan Cebuano Changana (Mozambika) Chichewa Chin (Hakha) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuuk Cinghalais Cinyanja Corsican Dangme Danoà Douala Drehu Efik Ekosey Gaelika Emberá (Chamí) Emberá Avaratra Emberá (Catío) Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Fon Frantsay Ga Galoà Garifuna Gitonga Goujrati Goun Grika Groenlandey Guahibo Guambiano Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Iban Ibanag Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Irlandey Islandey Isoko Italianina Japoney Javaney Kabiyè Kabuverdianu Kamba Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabo) Kekchi Khasi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreola any Martinika Kreôla Jamaikanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Belize Kreôla any Goadelopy Kreôla any Guyane Kreôla any Haïti Kreôla any La Réunion Kreôla any Seychelles Kroaty Kurde Kurmanji Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Lahu Letonianina Lhukonzo Lingala Litoanianina Lolo Lomwe Luganda Lunda Luo Luvale Macua Makhuwa-Meetto Makhuwa-Shirima Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Manyawa Mapudungun Marathe Marshall Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mbunda Mizo Mongol Mooré Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngangela Nias Niue Norvezianina Nsenga (Mozambika) Nyaneka Nyungwe Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Ourdou Ouzbek Ouzbek (Romanina) Palau Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Phimbi Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Ponape Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Páez Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotonga Romanianina Ronga Rosianina Runyankore Rutoro Rômania (Vlax any Rosia) Rômania (Gresy Atsimo) Rômania (Macédoine) Rômania (Macédoine) Sirilika Samoanina Sango Saramaccan Sena Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tajiki Tamoul Tarasque Tatar Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Bolivianina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Britanika Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Failandey Tenin’ny Tanana Frantsay Tenin’ny Tanana Grika Tenin’ny Tanana Hongroà Tenin’ny Tanana Indianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Jamaikanina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kenianina Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Paragoayanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Sinoa Tenin’ny Tanana Slovaky Tenin’ny Tanana Soedoà Tenin’ny Tanana Tailandey Tenin’ny Tanana Tseky Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Afrika Atsimo Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Cuba Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tenin’ny Tanan’ny avy any Philippines Tetun Dili Tewe Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tseky Tshiluba Tshwa Tsonga Turkmène Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Umbundu Urhobo Uruund Venda Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yap Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa tzeltal Éwé
Nisy mpanoratra Baiboly maromaro nasain’Andriamanitra nanoratra tsipiriany momba an’ilay ho Mpanjakan’ny Fanjakan’Andriamanitra. Hoatran’ny ahoana io Mpitondra io?
Nofidin’Andriamanitra. “Izaho efa nametraka ny mpanjakako. ... Ireo firenena ... homeko ho lovanao, ary ny vazan-tany efatra ... homeko ho fanananao.”​—Salamo 2:6, 8.
Mpandova ny seza fiandrianan’i Davida Mpanjaka. “Misy zaza teraka ho antsika, zazalahy no homena antsika ... Tsy hanam-pahataperana izany fahefana lehibe ananany izany ary tsy hisy farany koa ny fiadanana, eo amin’ny seza fiandrianan’i Davida sy ny fanjakany. Ho mafy orina izy io.”​—Isaia 9:6, 7.
Teraka tao Betlehema. “Ary ianao, ry Betlehema ... avy ao aminao no hivoahan’izay hotendreko ho mpitondra ... ho tonga hatrany amin’ny faran’ny tany ny fahefany.”​—Mika 5:2, 4.
Nolavin’ny olona sy novonoina ho faty. “Natao tsinontsinona izy, ary nohamavoinay. Notrobarana noho ny helokay ... izy, ary notorotoroina noho ny fahadisoanay.”​—Isaia 53:3, 5.
Natsangana tamin’ny maty ary nomem-boninahitra. “Tsy ho foinao hijanona ao amin’ny Fasana aho. Tsy havelanao hahita ny lavaka ilay mpanomponao tsy mivadika. ... Fahafinaretana no eo ankavananao, mandrakizay.”​—Salamo 16:10, 11.
I Jesosy Kristy no Mpanjaka Tsara Indrindra
Olona iray ihany hatramin’izay no nahafeno an’ireo fepetra ireo. Tsy iza izany fa i Jesosy Kristy. Izao mihitsy aza no nolazain’ny anjely iray tamin’i Maria renin’i Jesosy: “Andriamanitra hanome azy ny seza fiandrianan’i Davida rainy. ... Ary tsy hifarana mihitsy ny fanjakany.”​—Lioka 1:31-33.
Tsy lasa mpitondra teto an-tany mihitsy i Jesosy. Avy any an-danitra kosa io Mpanjaka io no hitondra ny olombelona. Nahoana izy no Mpitondra tsara indrindra? Diniho ny zavatra nataony tamin’izy tetỳ an-tany.
Niahy ny olona i Jesosy. Nanampy ny karazan’olona rehetra izy, na lahy na vavy, na antitra na tanora, na nanan-karena na nahantra. (Matio 9:36; Marka 10:16) Nisy boka nitalaho taminy, ohatra, indray mandeha hoe: “Raha mba sitrakao fotsiny mantsy ny hanadio ahy, dia ho vitanao izany.” Nangoraka azy i Jesosy ka nanasitrana azy.​—Marka 1:40-42.
Natorony antsika izay tokony hatao mba hampifaliana an’Andriamanitra. Hoy izy: “Tsy mahay manompo an’Andriamanitra sy ny Harena ianareo.” Nampirisika koa izy hoe: ‘Izay rehetra tianareo hataon’ny olona aminareo, dia mba ataovy aminy koa.’ Nampianatra koa izy fa tsy izay ataontsika ihany no hitan’Andriamanitra, fa fantany koa ny eritreritsika sy izay any am-pontsika any. Mila fehezintsika àry izay any am-pontsika lalina any, raha te hampifaly an’Andriamanitra isika. (Matio 5:28; 6:24; 7:12) Natorony koa hoe tena ho sambatra isika raha miezaka hahafantatra an’izay tian’Andriamanitra hataontsika, ary manao an’ilay izy.​—Lioka 11:28.
Nampianariny ho tia ny hafa isika. Tena nanohina ny fon’ny olona ny zavatra nataon’i Jesosy sy nolazainy. Milaza ny Matio 7:28, 29 hoe: “Nitolagaga ny vahoaka noho ny fomba fampianany. Nampianatra azy toy ny manana fahefana mantsy izy.” Nampianatra azy ireo koa i Jesosy hoe: “Tiavo ... ny fahavalonareo.” Nivavaka ho an’ireo tompon’andraikitra tamin’ny famonoana azy mihitsy aza izy. Nilaza izy hoe: “Ray ô, mamelà azy ireo, fa tsy fantany izay ataony.”​—Matio 5:44; Lioka 23:34.
I Jesosy àry no Mpitondra tsara indrindra ho an’ny olombelona. Tia manampy olona izy sady tsara fanahy. Rahoviana anefa izy no hanomboka hitondra?
Hizara Hizara Iza no Mpanjakan’ny Fanjakan’Andriamanitra?
“Ho Tonga Anie ny Fanjakanao!” Vavaka Averimberin’ny Olona An-tapitrisany
Nahoana Isika no Mila ny Fanjakan’Andriamanitra?
Rahoviana ny Fanjakan’Andriamanitra no Hitondra ny Tany?
Miezaha Hanohana ny Fanjakan’Andriamanitra Dieny Izao!
Soratra Fandikana boky NY TILIKAMBO FIAMBENANA Inona moa ny Fanjakan’Andriamanitra?
Hizara Hizara NY TILIKAMBO FIAMBENANA Inona moa ny Fanjakan’Andriamanitra?
NY TILIKAMBO FIAMBENANA Inona moa ny Fanjakan’Andriamanitra?